စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၁၄) ကြိမ်မြောက် အေဆမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
(18-12-2019 ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးကျော်တင်သည် စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၁၄)ကြိမ်မြောက် အေဆမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ယနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးအား စပိန်နိုင်ငံ၏ ဆဌမမြောက် ဘုရင်ဖီလစ်ပီမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး အေဆမ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း (၅၁) နိုင်ငံနှင့် ဥ‌ရောပသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးတို့မှ ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၊ ည‌နေပိုင်းတွင် ကျင်းပသော အေဆမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စပိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ပူးပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ခေတ္တဝန်ကြီးမှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ “Revitalizing the multilateral system-advancing the ASEM partnership on global issues” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာ၌ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လျင်မြန်သော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် ကာလတွင် အာရှနှင့် ဥရောပအကြား ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရာ၌ အေဆမ်၏ အခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုအရေးပါလာကြောင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာ၌ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုအရေးပါလာကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့နေမှုများအား သက်သာလျော့ပါးစေရန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေရန်တို့အတွက် ကာကွယ်သည့်အစီအစဉ်များ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းတို့အား ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုများသည် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ လိုအပ်ချက်များ၊ မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရေးသည် အထူးအရေးကြီးကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်းပါမူများနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသည့် နိုင်ငံတကာဥပဒေများအား လေးစားလိုက်နာရေးမှာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အရေးကြီးကြောင်း၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင် နိုင်ငံတကာဥပဒေအား ကျင့်သုံးရာ၌ သာတူညီမျှရှိစေရေး၊ သမာသမတ်ရှိ၍ ဘက်မလိုက်ရေးနှင့် စံနှုန်းနှစ်မျိုးဖြင့် ဆက်ဆံမှုမရှိစေရေးတို့အား အခြေခံဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် သမာသမတ်ရှိပြီး လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ရေး၊ ဘက်မလိုက်ရေးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရေး စသည့်မူများနှင့်အညီ ‌ဆောင်ရွက်ရန် အားထုတ်မှုနည်းသူများအား တာဝန်ပေးအပ်မှုကဲ့သို့သော လွဲမှားသော လုပ်ရပ်များအား ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် လုံခြုံရေးရာမူဝါဒ အကြီးအကဲဖြစ်သူ H.E. Mr. JosepBorrell မှ သဘာပတိအဖြစ်‌ ဆောင်ရွက်သည့် အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲ (Retreat Session) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ၏ နှစ်ပေါင်းရာစုချီသော ကာလမှစတင်ခဲ့သော နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်အခြေအနေများ၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှု စွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ခံမှုရှိစေရေးအတွက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုကိစ္စရပ်များကို အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
မက်ဒရစ်မြို့၌ ရှိနေစဉ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Dato Lim Jock Hoi နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာ ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ မြန်ဆန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အိမ်ရှင် စပိန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ပူးပေါင်း‌ဆောင်ရွက်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခေတ္တဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူထားသော H.E. Mr. Fernando M. ValenzuelaMarzo နှင့် သီးခြားတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ပြီး 9th Model ASEM သို့ တက်ရောက်လာသည့် မြန်မာလူငယ်ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးများသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ စပိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ဇေယျနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အာရှ-ဥရောပ ဆွေးနွေးပွဲ အေဆမ်သည် 1996 ခုနှစ်တွင် အာရှနှင့် ဥ‌ရောပအကြား အလွတ်သဘော အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင်ဥရောပမှ (30) နိုင်ငံနှင့် အာရှမှ (21) နိုင်ငံစုစုပေါင်း (53) နိုင်ငံနှင့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်သည့် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရုံးတို့ ပါဝင်သည်။ အေဆမ်ထိပ်သီးညီလာခံအား 2020 ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၌ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သွားရန်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။